Apple Inowana Mune Dambudziko Pamusoro Penguva "Animoji" | IPhone nhau
Apple inopinda mudambudziko pamusoro peshoko rekuti "Animoji"
Imwe yezvinhu zvitsva zvemakamera nema sensors zvinoita kuti Face ID ishande ichokwadi ichocho Tinogona kugadzira animated Emojis, kana sekambani yeCupertino yafunga kuvafonera: Animoji. Yegumi nerimwe mashandiro eIOS ayo anogona kuzopedzisira akundikana munzvimbo dzinozivikanwa kwazvo, sezvo zvinosuwisa zvatoitika semuenzaniso neRarama Mapikicha.
Zvisinei, zvinoita sekudaro Nyaya yeAnimoji ichaunza mutsara kwenguva yakati rebei, uye izvo ndezvekuti Apple ikozvino yave kubatanidzwa mune inonakidza yekutonga kernel, izvo zvingangopedzisira nekutanga kuwana yakawanda mari mukutsinhana nekutsakatika kubva pamepu. Ngatitangei kuziva iyo nyaya zvishoma zvakadzama.
Apple uye patent, iyo isingagumi nyaya. Sezviri pachena kambani inonzi Emonster yakaona zvakakodzera kuenda kuUnited States Patent uye Trademark Hofisi kuti iite izwi rekuti Animoji mukuru, zano raizoshandiswa mukati mekushandisa iro raizove nezita rimwe chete. Ichi chishandiso chakavhurwa muApple App Store kumashure muna2014, kunyangwe iri kubvira 2015 pavari kurwira patent zita. Sezvineiwo, chakaipisisa nyaya ndechekuti iyo Cupertino kambani haina kuuya kamwe kamwe.
Zvikuru zvekuti Apple yakatopa kambani kuti itenge brand, asi ivo vakazviramba. Vanoziva kuti kana vakazvipa pachena zvikazoperera mudare, vanozopedzisira vawana zvimwe zvakawanda. Asi kutaura chokwadi, kana zita iri raive ravo, vaive vakanyoresa uye vaive neruzivo rwakajeka ... wadii kuenda kunorwira chavo? Kutaura chokwadi ndechimwe chekunyunyuta kushoma pamusoro pemapepa ekuti zvinotyorwa neApple izvo zvandaizogona kunzwisisa. Ivai chero zvazvingava, mushambadzi Enrique Bonasea, muAmerican uyo parizvino anogara muJapan, zviri pachena kuti Apple iri kutyora kodzero yake. Isu tinoteedzera nyaya iri padhuze.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple inopinda mudambudziko pamusoro peshoko rekuti "Animoji"
Mhoroi, ini handifunge mhenyu mafoto kutadza, ndinonyatsovada. Dambudziko nderei navo?